Infos pratiques du voyage à Madagascar - Ravinala Airports
Ireo tsara ho fantatra mba hahatsara ny dia.
Sampandraharaha miandraikitra ny entana
Entana tsy azo entina anaty fiaramanidina
Toeram-pitsangatsanganana manakaiky ny seranam-piaramanidina
Découvrez les sites touristiques fascinants et incroyablement beaux près de l’aéroport d’Ivato.
Viza – E-viza
Viza idirana aty Madagasikara
ho an’ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika ny antana-tohatra tsy maintsy aleha mba ahazoana ny viza amin’ny aterineto eto Madagasikara, dia aza misalasala manendry ny rohy mankany amin’ny tranokalan’ny eviza.
Ireo vahiny rehetra mandeha eto Madagasikara dia tsy maintsy mitondra taratasy manambara ny mahavahiny izay mbola manan-kery (pasipaoro manan-kery mihoatra ny enim-bolana ary misy pejy banga iray ametrahana ny viza ho an’ny fizahan-tany omena aty an-toerana ), ary manana nyh tapakila fiverenana. Ao anatin’io taratasy io dia tokony ahitana ny viza fidirany eto.
Misy karazany roa ny viza:
Viza ho an’ny tsy mpifindra monina :
Ny viza fidirana sy fivahinianana afaka idirana indray na intelo farafahabetsany natokana ho an’ny mpizaha tany dia ny mpiasan’ny masoivoho na ny consulat an’i Madagasikara any ivelany no mamoaka azy. Ho an’ny viza omena eto an-toerana izay omen’ ny seranam-piaramanidina na ny seranana fiaingana izay andoavana sandany dia ahazona fidirana indray mandeha ihany.
Ny viza fivahinianana tsy ho an’ny mpifindra monina ao anatin’ny latsaky ny telo volana dia azo ampitomboina any amin’ny tobin’ny polisy mandritra ny fotoana maharitra ary tsy mihoatra ny telo volana. Tsy azo ovaina ho viza maharitra anefa izy ireo. Ny fahazoan-dàlana toy izany dia tsy manome alalana ny vahiny tsy mpifindra monina handray anjara amin’ny asa andraisan-karama eto amin’ny firenena na mandray anjara amin’ny asa mety ahazoana tombony.
Tsindrio ny rohy eto ambany, raha mila fanazavana fanampiny momba ny vola aloa amin’ny Viza eto Madagasikara : Viza Madagascar
Viza ho an’ny mpifindra monina
Ireo dia viza ahafahana miditra sy mipetraka mandritra ny iray volana, azo ovaina na halavaina , izay omena ireo mpifindra monina , na avy amin’ny solontenan’ny masoivoho diplomatika Malagasy, na noho ny antony manokana dia omen’ny mpiandraikitra ny serasera ao amin’ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny. Ity karazana viza ity dia tsy azo avoaka amin’ny seranam-piaramanidina na any amin’ny seranana fiantsonana. Ny viza ahazona mipetraka dia azo havaozina sy azo ampitomboina. Azo angatahana fanalavana eny amin’ny Biraon’ny Polisy ka mila mampiseho ny taratasy fangatahana napetraka tany amin’ny Ministeran’ny Atitany. Ny viza ahazoana mipetraka dia tsy maintsy hita ao anatin’ny pasipaoro na amin’ny karatra mahavahiny (CIE) na amin’ny taratasy fanamarinana ny fametrahana antontan-taratasy tany amin’ny minisitry ny atitany raha toa ka mbola eo am-pandinihana ny taratasy , amin’izay dia mahasolo ny fahazoan-dàlana tsy maharitra io fanamarinana io.